सडक सुरक्षा र जेब्राक्रसिङ - विचार - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौं — सडक दुर्घटनामा विश्वमा हरेक वर्ष १३ लाख मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन् । नेपालमा हरेक वर्ष सडक दुर्घटनामा करिब दुई हजार जनाले ज्यान गुमाउँछन् ।
प्राविधिक रूपले हाम्रो देशमा ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली निकै परम्परागत छ, जसमा ट्राफिक प्रहरीले नै सडकमा उभिएर सिठ्ठी फुकी सवारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्य देशमा निकै वर्ष अघिदेखि नै प्रयोगमा आएको स्वचालित ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली हाम्रो देशमा पनि अविलम्ब लागू हुन जरुरी छ । जेब्राक्रसिङलाई स्वचालित ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणालीसँंग एकीकृत गरी सडक सुरक्षालाई आधुनिकीकरण गर्न जरुरी छ ।
प्रकाशित : श्रावण ४, २०७४ ०७:४४
चुनाव र रेल सपना
वैशाख २५, २०७४ आशिष गजुरेल
देशभर चुनावी माहोल तातिरहेका बेला विभिन्न पार्टी आफ्ना आकर्षक चुनावी घोषणापत्रमार्फत मतदाता आकर्षित गर्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । लामो समयको राजनीतिक संक्रमणपछि जनतामा देखिएको आर्थिक विकासको चाहना नजिकबाट हेरिरहेका राजनीतिक दलहरूले अहिले आफ्ना प्रमुख चुनावी एजेन्डा नै पूर्वाधार लगायत आर्थिक विकासमा केन्द्रित गरेको पाइन्छ ।
तर मतदातालाई आफ्नो एजेन्डामा तान्न प्रमुख औजारको रूपमा उपयोग गरिने चुनावी घोषणापत्र हेर्दा राजनीतिक दल र उनीहरूका उम्मेदवारहरू पूर्वाधार विकासका सामान्य प्रक्रियाबारे पनि अनविज्ञ रहेको देखियो ।
विकासका गतिविधि स्थानीय तहमा सुस्ताएका बेला उम्मेदवारहरू विकासे नारा लिएर आउनु अनौठो होइन । त्यसमाथि पनि चुनावी घोषणापत्र भने नियमित सरकारी बजेटभन्दा बढी महत्त्वाकांक्षी हुने गर्छन् । अहिले स्थानीय चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेका ठूला र पुराना पार्टीदेखि यसै वर्षमात्र गठन भएका साना र नयाँ पार्टीहरूका चुनावी घोषणापत्र सरसर्ती पढ्ने हो भने उनीहरूका अगाडि ल्याएका कार्यक्रम अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी छन् । उनीहरूले भनेको समयसीमामा कार्यान्वयन गर्न कठिनमात्र होइन, असम्भव नै देखिन्छ ।
प्राय: सबै पार्टीले अगाडि ल्याएको योजना हो– रेल, द्रुतमार्ग र स्मार्ट सिटी निर्माण । चुनावको मुखमा आएर उम्मेदवारहरूले मेट्रो रेल र मोनो रेलजस्ता जटिल सडक पूर्वाधारहरू दुईदेखि तीन वर्षमा सञ्चालनमै ल्याउने दाबी गरेको पाइन्छ । उनीहरूले भनेजस्तै हामीले ती पूर्वाधारहरू यति छोटो अवधिमा विकास गर्न सम्भव छ त ? यो प्रतिबद्धता उनीहरूले सम्बन्धित प्राविधिकहरूसँगको परामर्शमा ल्याएका होलान् त ? आम मतदाताबीच यो प्रश्न उव्जिन सक्छ । हामी यस्ता पूर्वाधार विकास गरिसकेको अन्य देशको अनुभवलाई अध्ययन गर्ने हो भने उम्मेदवारहरूले ल्याएका यस्ता योजना भोट तान्नका लागिमात्र हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । दिल्ली मेट्रोकै उदाहरण काफी छ । यसको पहिलो चरणको निर्माण (६५ किमि) बनाउन १९९८ देखि २००५ सम्म ७ वर्ष ३ महिना लागेको थियो । त्यस्तै मुम्बई मेट्रो (११.४ किमि) बनाउन २००८ देखि २०१४ सम्म ६ वर्ष लागेको थियो । दुबई मेट्रो (२३ किमि) लाई योजनादेखि सञ्चालनका लागि सन् २००२ देखि २०११ सम्म अर्थात ९ वर्ष लाग्यो ।
साधन, स्रोत तथा प्रविधिमा हामीभन्दा निकै अगाडि रहेका ती सहरमा त मेट्रो रेल सञ्चालन गर्न त्यति लामो अवधि लाग्छ भन्ने हाम्रो देशमा जादुको छडीले जसरी यस्ता पूर्वाधार बनाउने योजना ल्याउनु भनेको पूर्वाधार विकासको प्रक्रिया र प्राविधिक पक्षबारे अनविज्ञता नै हो । लामो समयदेखि निराशामा बाँचेको जनतामा आशा जगाउने गरी केही विकासका योजना र दूरदृष्टि देखाउनु नराम्रो भने होइन । यत्तिमात्र हो, उम्मेदवारले आफ्ना योजनाहरू कार्यान्वयन सम्भव हुने खालका ल्याउनुपर्छ । बरु उनीहरूले यस्ता कार्यक्रम र योजना कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने खाका वा रोडम्यापसमेत पेस गर्नसके जनताले विश्वास गर्ने स्थिति हुन्छ । नत्र केवल ठूला सपना चुनावको बेला देखाउने र कार्यान्वयन गर्न नसकिने हो भने जनतामाझ निराशा र आक्रोश उत्पन्न हुनसक्छ । त्यसले भोलि जित्ने उम्मेदवारमात्र होइन, सम्बन्धित पार्टीको विश्वसनीयतामाथि नै नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।
देश विकासको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार रेल हो । बेलायतको औद्योगीकरणलाई रेलको विकासले ठूलो मद्दत गरेको थियो । छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा संसारकै ठूलो रेल नेटवर्क छ, जसले गर्दा ती देशको विकासमा सहयोग पुगेको छ । नेपालमा पनि विकासको मूलबाहक रेलसेवा हुनसक्ने देखेर उम्मेदवारले रेलवे विकासलाई आफ्ना प्रमुख एजेन्डा बनाएका हुन सक्छन् । तर कसैले महानगरमा मेट्रो त कसैले देशभर रेलसेवा विस्तार गर्ने भनेका छन् ।
रेल विकासका लागि नेपालमा रेल विभागसमेत स्थापना भैसकेको छ । यो निकायले नै देशमा रेल विकासको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएको छ । नेपालसँग रेल विकासको अनुभव छैन ।
काठमाडौंमा मेट्रो सपना
नेपाल सरकारले कोरियन कम्पनीमार्फत सम्भाव्यता अध्ययन २०१२ मा गरेको थियो । अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकामा ५ लाइनको ७८ किमि रेल सञ्जालको कल्पना गरेको छ । अध्ययनले देखाएअनुसार एउटा लाइन विकास गर्न ६ वर्ष र पुरै बनाउन १४ वर्ष लाग्छ ।
तुरुन्त मेट्रो रेल बनाउनतिर लाग्ने हो भने पनि पहिले त २०१२ को अध्ययनलाई हेरेर कुन रूटमा रेल निर्माण गर्ने, कुन मोडलमा विकास गर्ने, कुन निकायमार्फत गर्ने, स्रोत कहाँबाट जुटाउने लगायतका कुरा निक्र्योल गर्न नै कम्तीमा एक वर्ष लाग्छ । मोडलमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी कि नेपाल सरकार आफै बनाउने भन्नेमा एउटा निर्णय होला । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा विकास गरिने हो भने खरिद प्रक्रियामा कम्तीमा पनि एक वर्ष लाग्छ । त्यसपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि थप ६ महिनादेखि १ वर्ष, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अर्को १ वर्ष लाग्छ । रेल परियोजना निकै खर्चिलो र जोखिम बढी हुने भएकोले लगानीकर्ताहरू हतपत आकर्षित हुँदैनन् । निर्माण अगाडिकै प्रक्रियामा हामीले ३ वर्ष खर्चिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि समान्य अवस्थामा पनि कम्तीमा ४/५ वर्ष निर्माणका लागि चाहिन्छ । नेपाल सरकारले बनाउने हो भने पनि वित्तीय व्यवस्थापन बाहेक सबै प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि पनि कम्तीमा २ वर्ष खर्च गर्नुपर्छ, निर्माण अघिकै चरणमा ।
परियोजनाको लागि छनोट भएको स्थानको माटोको अवस्था तथा आवश्यक जग्गा अधिग्रहणमा लाग्ने समयले पनि परियोजना विकासमा लाग्ने समय निर्धारण हुन्छ । त्यसमाथि पनि हामीकहाँ जग्गा अधिग्रहणको समस्याले परियोजना विकासको प्रक्रिया वर्षाैं पछाडि धकेलिने गरेको तितो अनुभव छ । नेपालको आर्थिक उन्नतिका लागि पूर्वाधार विकास अनिवार्य रहेकामा सबै सहमत छन् । तर नेपाल सरकार आफैंले राष्ट्रिय गौरवको योजना भनी पहिचान गरेको योजना समेतको कार्यान्वयन निराशाजनक रहेको सबैलाई थाहा छ ।
उचित के हुन्छ ?
राजनीतिक नेताले विकासको सपना देख्नु अस्वाभाविक होइन । तर त्यसको कार्यान्वयन सरकारी निकाय वा सम्बन्धित प्राविधिकले गर्ने हो । यस्ता महत्त्वाकांक्षी योजना बनाउँदा कम्तीमा पनि सम्बन्धित प्राविधिकहरूसँग सल्लाह गर्नुपर्छ । कार्यान्वयनको सम्भाव्यताबारे यथार्थ बुझ्नुपर्छ । विकासका योजना अगाडि ल्याउँदा कार्यान्वयन गर्न सकिने आधार उम्मेदवारहरूले विश्वास लाग्ने तरिकाले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । मतदातालाई लोभ्याउने तरिकामात्र अपनाइए जनता थप निराश हुनेछन् ।
गजुरेल यातायात इन्जिनियर हुन् ।
प्रकाशित : वैशाख २५, २०७४ ०९:०१